Thai Nepal News:: गण्डकी गाउँपालिका बनाउने तिवारीको योजना
•et; करारका १३ हजार कर्मचारीको भविष्य अन्योलमा •et; सर्बोच्चकै सरकार माथि यक्सन निषेधाज्ञा लगाउने निर्णयमा सर्वोच्चको रोक •et; रचनात्मक सहयोग गर्न तयार : नेता गच्छदार •et; कसले उचाल्ला २१ औं विश्वकपको ट्रफी ? •et; तयारीविनाको समृद्धि यात्रा
गण्डकी गाउँपालिका बनाउने तिवारीको योजना
आईतबार, २४ वैशाख, गोरखा । नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल र संघीय समाजवादी फोरमबाट गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका प्रमुखका उम्मेदवार कुमार तिवारीले गाउँलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने बताएका छन् ।
उनले भुम्लीचोकको भैरवी डाँडा देखि मनकामना जाने पर्यटकीय पैदल मार्ग निर्माण गरिने बताए । ‘सुन्दर दृष्य अवलोकन गर्दै धार्मिक आस्थाको केन्द्र मनकामना जाने पैदल मार्र्ग बनाउनु पर्छ’, तिवारीले भने, ‘यो पदमार्गले पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने छ ।’ भैरवी डाँडामा भ्यू टावर निर्माण गर्ने पनि उनले बताए ।
बढीगण्डकी परियोजना बनेपछि विस्थापितलाई परियोजनाकै लगानीमा ५० प्रतिशत सेयर र व्याक्तिगत लगानीमा थप ५० प्रतिशत सेयरको व्यवस्था गर्ने बताए । यस्तै उनले प्रभावितहरुलाई २५ प्रतिशत परियोजनाको लगानी र २५ प्रतिशत आफ्नै लगानीमा शेयर दिलाउने बताए ।
यस्तै तिवारीले कृषिमा आधुनिकिकरण गर्ने र स्वरोजगारको वातावरण सृजना गर्ने योजना पस्केका छन् । उनले दिर्घकालिन र अल्पकालिन गरेर कृषि र पशुपालनलाई व्यवसायीकरण गर्दै स्थानीयको आम्दानी बढाउने बताएका छन् । सामुदायीक विद्यालयको सुधार गरी शिक्षाको गुणस्तर बढाउने उनको योजना छ । गाउँपालिकामा नै गुणस्तरीय शिक्षा दिलाउने उनले बताए ।
तिवारी गोरखामा लोकप्रिय युवा नेताको रुपमा स्थापित छन् । गोरखा मै वसेर लामो समय विद्यार्थी राजनीति गरेका तिवारी नयाँ शक्तिका केन्द्रीय परिषद सदस्य समेत हुन् ।
अमेजमान कम्पनि पुर्ण रूपमा सञ्चालनमा होटेल कसरी बुकिङ गर्ने ?
अमेजमान ग्रुप अफ कम्पनि पुर्णरूपमा सञ्चाललनमा अमेजमान पिटिइ एलटिडि सिङ्गापुर तथा अमेजमाण ग्रुप अफ...
नयाँ शक्ति पार्टी का नेता तथा युवा ब्यावसाही सुनिल खड्का र पछिल्लो समय उदाएको...